नेपालको सार्वभौ’मसत्तामाथि नै प्रहार गर्ने एमसीसी खा’रेज गरौँ- अमेरिकी अनुसन्धान’कर्ता डा. मेरी डेशेन(भिडियोसहित) – Nepali Taja Khabar
आ’फ्नो फेसबु’कको क’भर फोटोमा नै एमसीसी खारेज गरौ भन्दै फोटो अपलोड गर्ने अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता डा. मेरी डेशेन यी नै हुन् !मान’वशास्त्री ए’वम् अनु’सन्धानकर्ता डा. मेरी डेशेन ग्रीनकार्डधारी अमेरिकी नागरिक हुन् ।
नेपालमा एमसीसी संसोधनसहित पारित गरिनु पर्छ भन्नेहरुको बीच डा. डेशेन यसलाई संसोधन होइन खारेज नै गरेर नेपालले अस्विकार गर्नु पर्ने बताएकी छिन ।कडा शब्दमा यसरी बुझाउछिन् एमसीसीबारे डा. डेशेन-
“अमेरिकाले अनुदान सहयोगको नाममा नेपाललाई सिधै लुटपाट गर्ने नि’काय हो एमसीसी ।”लगभग १ घण्टा ४६ मि’नेटको अन’लाइन छलफलमा डेशेनले राखेको धारणाको सार संक्षेप यस्तो छ :-एमसीसी समर्थकहरुले किन नेपालीहरुलाई आर्थिक बिकाश हुन्छ भन्दै भ्रम छरेको भनेर गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेकी छिन । एम’सीसीले दिने आर्थिक बिकाश भनेको निजीकरण मार्फत हो जसको असमान नतिजा विश्वले देखिसकेको छ ।
यो पनि,,,”मैले विवाह गर्ने पुरुष ‘ऋषि धमला’ जस्तै हुनुपर्छ” – नायिका केकी अधिकारी (भिडियोसहित)काठमाडौं ।चर्चित ना’यिका केकी अधिकारीले आफू अहिले विवाह गर्नको लागि मान’सिक रुपमा त’यार नरहेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्र’सारण भ’एको धम’लाको हम’लामा पत्रकार ऋषि धम’लासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
यद्धपी आफूलाई घरपरि’वारबाट भने वि’वाहको लागि आग्रह भैरहेको उनले जानकारी दिईन् । उनले अझै केही वर्ष विवाह नगर्ने स्पष्ट पारिन् ।उनले भनिन्,‘विवाह गर्नुत छँदैछ, विवाह मनपर्ने संस्था हो । त्य’सपछि जी’वन अ’गाडि बढ्छ ।’ उनले आफूले असल जीवनसाथी खोजेको सुनाईन् ।उ’नले आफू क’हिल्यैपनि भूत र भविष्यमा नअल्झिने बरु वर्त’मानमा केन्द्रित रहने व्यक्ति भएको पनि सुनाईन् ।
एक सानो बालक कपिल रोक्का जो आफ्नो बुबा आमाले सडकमा छोडेका आज पुगे spain got talent मा(हेर्नुहोस् पूरा भिडियो)